Akụkọ - Gini bu ihe di iche na ndi ozo
Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti yinye ndoli na menjuobi ndoli
Nke mbụ, ọdịiche dị na ụkpụrụ ọrụ:
Na yinye ndoli na-agbagharị site na ịdọpụta aka na aka aka, na ịpị esemokwu esemokwu na oche breeki n'ime otu ma na-agbakọta ọnụ. Ogologo ogologo 5 na-emegharị mpempe mpempe akwụkwọ, 4 ezé dị mkpụmkpụ na oghere oghere spline.N'ụzọ dị otú a, ndọtị na-ebuli elu na ihe nkedo oghere na-eme ka eriri na-ebuli elu, si otú ahụ na-ebuli ibu ahụ.
The ngwaahịa adopts ratchet esemokwu disc ụdị otu ụzọ breeki, nke nwere ike breeki site n'onwe ya n'okpuru ibu, na ratchet pawl meshing na ratchet wheel n'okpuru ihe nke oge opupu ihe ubi iji hụ na nchekwa ọrụ nke brekị. Ọ bụ nchebe na a pụrụ ịdabere na, mfe mmezi, elu n'ibu arụmọrụ, mgbaaka Anam Udeme ike bụ obere, ìhè arọ na-ebu, e ji mara ndị obere size nke mara mma anya, inogide, adabara ụlọ mmepụta ihe, mines, ewu na saịtị, piers, docks, ụlọ nkwakọba ihe, wdg Jiri maka igwe echichi , na-ebuli ngwongwo, karịsịa maka imeghe na enweghị ọrụ ike, na ebe na-ere ọkụ na mgbawa karịa, nwere ọrụ dị mkpa.
Menjuobi ndoli bụ site na aka mmadụ na-ejide ya na mpempe akwụkwọ iji nweta usoro traktị linear dabara na ibu, ntụgharị nke ihe na ahụ mwekota nke ibu n'ime mmegharị ahụ, na-ebugharị ọrụ ahụ.Ọ nwere uru nke usoro kọmpat, ịdị arọ dị mfe. , obere obere, dị mfe ibu, nchekwa na ntụkwasị obi, ndụ ogologo ndụ, obere aka na-adọta ike na eriri waya na-eyi na ihe ndị ọzọ.
Ọ nwere ike ịrụpụta ebuli, wetuo, mmezi na arụmọrụ ndị ọzọ .Ọ bụrụ na akụrụngwa pụrụ iche, ọ bụghị naanị ike ịrụ ọrụ na-abụghị eriri, kamakwa ọ ga-adị mfe iji họrọ ọnọdụ arụmọrụ kwesịrị ekwesị, ma ọ bụ jiri obere elekere nke igwe ahụ. ba uba ya ibu ikike, n'ihi na ibu tonnage nke ibu nwere ike ji mee ihe site na ọtụtụ igwe na ngwaọrụ yiri ọrụ.
Lee foto nke ASAKA’gourd n'okpuru maka nkọwa.
Nke abụọ. Kedu nke na-azọpụta mbọ ọrụ mgbe ị na-eji ihe eji agagharị ma ọ bụ ihe eji akwụ ụgwọ?
Hand esiri ndoli imewe bụ tumadi obibi ohere dị obere ma ọ bụ na ọ bụghị ezigbo erughị ala postcho mgbe eji, n'ozuzu aka esiri ndoli eji mee ka a kehoraizin erughị ala, kehoraizin ojiji nke oru, n'aka sere ndoli bụ vetikal ojiji, vetikal ojiji nke oru .Hand sere ndoli na-chụpụrụ bụghị n'aka sere sere, ma site rocker.
Nke ato, olu ndoli na ihe mkpuchi nke a na-ejikarị eme ihe?
Free menjuobi ndoli gia, ị na-atụgharị menjuobi ndoli braking ka ọdịiche mgbe aka gị sere n'elu ibu ga-adị mfe kwatuo, ma ọ bụ iji dọghachi azụ na-adaba adaba mgbanwe menjuba ndoli na traction anya, adaba na ngwa ngwa traction | ma ọ bụ na-eweli, ọzọ menjuobi ndoli yinye blocks na otu eweli olu tụnyere, Hand Anam Udeme calabash bụ nnọọ obere karịa n'aka Anam Udeme calabash, na ọ bụ ihe oru oma site na ọrụ nke aka Anam Udeme calabash na wider ngwa.